Makhirland iyo Maoriga New Zealand
Dalka New Zealand waxaa deganaa dadka Maori loo yaqaano intii aanay reer Yurub tegin, wuxuuna ka mid yahay wadamada Cadaanku kala wareegeen dadkii deganaa sida Maraykanka iyo Australiya.
In kastoo dhiig badan ku daatay waa u suurta geli weydey reer Yurub inay la wareegaan ALjeeriya (Jazaa'ir), South Africa iyo Zimbaabwe oo la oran jirey Rhodesia. Falastiin, iyadu weli waa ka gilgilaneysaa in loo dhammeeyo oo reer Yurub la wareegaan.
Waxa kaloo jira waddamo u sharraxan in si dadban loola wareego sida Somaliya oo lagu soo fasixi doono, laguna soo hubeyn doono dadyowga faraha badan ee waddamada deriska la ah. Marka Somalida laga tira bato oo la ogaado inaaney doorashada waxba ku heleyn ayuun baa sida Maoriga reer New zealand lagu oran doonaa doorashada ka qayb gala haddaad rabtaan inaad sida dadka adduunka u noolaataan.
Waxa kaloo xusid mudan in dadka reer Makhirland ay ku soo socoto mushkiladda Reer Maori heshay. Miskiinku sax ma noqon karo oo waddankiisa iyo dadkiisaba ama si toos ah ayaa loo qaadan ama si dadban.
Khaatumo Bin Jacfar AlMakhzuumi